I-Almhütte – I-Pirkeralm (iholide kwi-Saualm) - I-Airbnb
I-Almhütte – I-Pirkeralm (iholide kwi-Saualm)
Oberwietingberg, Kärnten, Austria
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguStefan
Ngo-1960, inqugwala le-rustic alpine lentsapho yakwaRatheiser lakhiwa kwindawo efihlakeleyo kwaye belisoloko lizonwabisa iindwendwe zalo. I-Pirkerhütte izilungele kakuhle iintsapho, abahlobo kunye nabantu abathanda indalo abafuna ukuzonwabisa ngendlela ekhethekileyo kule ndawo. I-Pirkeralm yindawo emangalisayo, eqaqambileyo emhlabeni enika abantu uxolo namandla kubomi bemihla ngemihla!
Inqugwala lahlulwe lalinamagumbi amabini (igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlala).
Igumbi lokuhlala nelokutyela linesitovu seenkuni njengendawo yokupheka neyokufudumeza, isinki, indawo yokuhlala etofotofo, evulekileyo netafile nesofa ekwayibhedi.
Kwigumbi lokulala, ibhedi elala abantu ababini, kunye neebhedi ezimbini ezikhweleneyo ezineendlela ezimbini zokulala, nganye ikumema ukuba wonwabele ukulala kunye, njengoko kwakuqhelekile kwixesha elidlulileyo. Igumbi lokulala lifudumele kwaye linefenitshala enothando kwaye iibhedi zenziwe ngokutsha ngaphambi kokufika ngakunye.
Isofa ekwigumbi lokuhlala nelokutyela nayo ingenziwa ukuba kuyimfuneko ukuba kubekho indlela yokulala kwiindwendwe ezimbini ezongezelelekileyo.
Izinja zamkelekile, kodwa kufuneka iindwendwe zize namashiti azo.
Inqugwala libekwe kwiPirkeralm malunga ne-1,300 m ngaphezu kolwandle ngaselunxwemeni lwehlathi ukuya kummandla omkhulu we-alpine. Apha, eyethu imfuyo, enjengawe, eyonwabela ihlobo kwifama ye-alpine. Nangona kunjalo, inqugwala kunye negadi ngaphambili zibiyelwe.
Kwindawo efanayo ye-Oberwietingberg, okanye i-Kirchberg kunye ne-Breitofneralm, kunye ne-Weißbergeralm, ukongezelela kwiindlela ezininzi zokunyuka intaba kunye namahlathi, kukho ne-inn (i-Forellenwirt family Uitz), i-bush shack (i-Liegl family). I-Iregger) kunye namaqonga amabini asebenzayo e-alpine (i-Breitofnerhütte kunye ne-Weißbergerhütte). Ezi zinokufikelelwa ngeenyawo, ngebhayisekile okanye ngemoto.
Ukuba ukwimeko entle ngeentlobo ezininzi, kukho ipuli enomhlaba omhle e Klein St. Paul, iLängsee kumasipala waseSt. Georgen/Längsee, umboniso wam eKnappenberg, kunye nehlobo le-toboggan ebaleka kwiKlippitztörl. Yonke into kunye nokunye okuninzi kunokufikelelwa ngemoto kwisithuba seyure enye. Ukuba ikwayindawo nje yokuthenga engenazinkathazo kwidolophu endala etofotofo yaseSt. Veit an der Glan okanye eKlagenfurt, ezi ndawo zikufutshane kakhulu.
Izolimo bezilawula iPirkeralm kangangamashumi eminyaka, kuba ngaphandle kokufuya amabala ethu, bekungekho nto ilula kule ndawo intle.
Intsapho yaseRatheiser ifama ephilayo kwaye ivelisa ubisi kunye neemveliso zeziqhamo ezifanelekileyo. Zive ukhululekile ukonwabela iimveliso zethu. Emva koku-odola kwangaphambili, sinokukunika ijusi entle yasekuhlaleni yeapile okanye iwayini yeapile ephilayo (emininzi) kunye nemililo ehloniphekileyo kwiqhugwane kwangaphambili. Ibhotile yobisi olusandul 'ukuvunwa "nolungenzwanga luyafumaneka nanini na! (Ukulandelelanisa kwangaphambili zonke iimveliso kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokufika ku: 0650/9239777)
Into ekhethekileyo yeCarinthian Almen kukutya okufanelekileyo kunye nenyama yasekuhlaleni kunye neemveliso zobisi ngqo kwifama. Ngokuqinisekileyo ufanele uzame le ndawo iqhelekileyo yeCarinthian ngexesha leholide ye-alpine! Ngenxa yale njongo, izinto ezenziwayo sele zenzelwe iholide xa iindwendwe zifika. Kwifama, iimveliso zobisi zingathengwa kwiSonnenalm eseLowin St. Paul naseOberwietingberg, xa ungena kwiqhugwane, unokufumana izimuncumuncu ngqo kumlimi.
Intsapho yaseRatheiser ifama ephila…